Mesut Ozil oo isku ekeysiiyey gabadhii koobka adduunka u qaaday Mareykanka ee Megan Rapinoe… (Sabab yaab leh oo ka dambeysa!) – Gool FM
Mesut Ozil oo isku ekeysiiyey gabadhii koobka adduunka u qaaday Mareykanka ee Megan Rapinoe… (Sabab yaab leh oo ka dambeysa!)
(Mareykanka) 17 Luulyo 2019. Pierre-Emerick Aubameyang ayaa ku shitay Mesut Ozil mar uu Instagram-ka soo dhigay, isagoo ku tilamaamay inuu u egyahay gabadha koobka addduunka sanadkan u qaaday dalka Mareykanka ee Megan Rapinoe kaddib markii uu Ozil timaha caddeystay.
Xiddiga reer Jarmal ayaa shaaca ka qaaday in looga guuleystay sharad, sababtaas darteedna uu timaha u caddeystay isagoo xusay in sharadka looga guuleystay uu ahaa tartankan kubadda birta goosha meel sare looga dhifto ama kubbad bir ku garaaca ee ‘Crossbar challenge’, waxaana kaga adkaaday sida uu sheegay Alexandre Lacazette.
Ozil oo 30 sano jir ah ayaa kursiga keydka ka soo kacay kulankii ay guusha 3-0 ka gaareen kooxda Colorado Rapids habeenkii Isniinta isagoo markaa lahaa tintiisii caadiga ahayd ee lagu yaqaanay.
Laakiin saacado yar kaddib saaxiibadiisa ay isku kooxda yihiin ayaa layaabay markii uu garoonka la soo galay timaha oo uu soo caddeystay oo blonde ah tababarkii ay ku qaadanayeen xero ku taala Magaalada Los Angeles halkaasoo ay kooxdiisa Gunners ka waddo u diyaar-garowgooda xilli ciyaareedka cusub.
Yeelkeede, ma’ahayn dooq geesinnimo ah oo uu isagu lahaa.
Ozil ayaa qiray in isbedelkiisa tinta uu ka dambeeyey xiddiga kooxda Arsenal ee Lacazette oo 28-sano jir ah, isla markaana uu dhibane u noqday sharad uu kaga guuleystay xiddiga reer France.
Xiddiga reer Jarmal ee Ozil ayaa u sheegay Sports Direct Football: “Sharad ayaa la iiga guuleystay ama aan iraahdee Laca ayaa sharad innooga guuleystay.”
“Haa ‘Crossbar challenge’, Aniga, Sead Kolasinac iyo Shkodran Mustafi dhammaanteen waan guuldarreysannay.”
Dhinaca kale Aubameyang ayaa ku qoslay Ozil qaabka uu timaha u soo sameystay, waxaana sawir iyo qoraal uu soo dhigay bartiisa Instagram-ka uu kula barbardhigay xiddigta koobka Adduunka ku guuleysatay ee Rapinoe.
WARBIXIN: Taariikh nololeedka gaarka ah ee Marcelo, Faqiirnimadii uu ku soo koray & Sida uu ku noqday xiddig caan ah
WARKII HORE WAR SOO DHAAF: Neymar aabihiis iyo agaasimaha ciyaaraha ee kooxda Juventus oo ku kulmi doono magaalada Turin